Sukutyhola i-CMS, Utyhole uMyili woMxholo | Martech Zone
Sukutyhola i-CMS, Utyhole uMyili woMxholo
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 22, 2012 NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2020 Douglas Karr
Ngale ntsasa bendinomnxeba omkhulu kunye nomthengi onokubakho malunga nabo Amaqhinga okuthengisa angenayo. Bakhankanye ukuba babedibana nenkampani yokuphuhlisa iwebhusayithi yabo. Ndiqaphele ngaphambi komnxeba ukuba sele bekhona WordPress kwaye wabuza ukuba baya kuqhubeka nokuyisebenzisa. Uthe akunjalo kwaye wathi yayimbi… akanakukwazi ukwenza nantoni na ngendawo yakhe ayifunayo. Namhlanje uthetha nenkampani eza kuphuhlisa kwiNjini yokuBonisa.
Kwafuneka ndichaze ukuba sisebenze kunye Injini yokubonisa ngokubanzi kakhulu, nako. Sisebenze noJoomla, Drupal, Indlela yentengiso, Immax kunye nezinye iinkqubo zolawulo lomxholo. Ngelixa ezinye iinkqubo ze-CMS ziye zafuna ukhathalelo luthando lokunyusa onke amancedo ophando kunye noluntu, sifumanise ukuba uninzi lweenkqubo ze-CMS zenziwe zilingana ngokulinganayo… kwaye ngenene zahlulwe kuphela ngumsebenzi wolawulo kunye nokusetyenziswa ngokulula.
Ndingakulungela ukubheja ukuba lo mthengi unokufeza nantoni na angathanda ukuyenza kwi-WordPress. Ingxaki ayisiyiWordPress, nangona kunjalo, yindlela umxholo wakhe ophuhliswe ngayo. Umthengi omnye esiqale ukusebenza naye kutshanje yinkampani ye-VA Loan Refinance. Bayinkampani enkulu-ebuyisela imali kwizibonelelo zamagorha ngalo lonke ixesha beqokelela ukuhanjiswa. Nangona senza itoni yokwenza i-WordPress ngokwezifiso, asiqinisekanga ukuba umthengi unokuba nesiza esihle, esilungiselelwe kunye nesisebenzisekayo nakweyiphi na i-CMS kangangoko banakho kwi-WordPress. I-WordPress ithandwa ngoku ngoku sizifumana sisebenza ngakumbi kweliqonga kunabanye.
Imali-mboleko ye-VA ithenge umxholo wesiko emva koko wasiqesha ukuba siphuhlise uphando kunye nezicwangciso zentlalo. Umxholo wawuyintlekele… akukho kusetyenziselwa iibar esecaleni, iimenyu, okanye iiwijethi. Yonke into yayinekhowudi enzima kwitemplate yabo ngaphandle kokusebenzisa naziphi na izinto ezintle ezifumaneka kwiWindowsPress. Sichithe iinyanga ezimbalwa ezizayo sihlaziya umxholo, sidibanisa Gravity Forms nge-Leads360, kwaye bekwakhulisa iwijethi efumana amaxabiso obambiso lwamva nje ukubonisa indawo yabo kwibhanki yabo.
Le yingxaki yenkqubo yoyilo lomxholo kunye neearhente. Bayayiqonda indlela yokwenza ukuba indawo ibonakale intle, kodwa hayi indlela yokusebenzisa ngokupheleleyo i-CMS ukubandakanya zonke izinto ezahlukeneyo ezinokufunwa ngumthengi kamva. Ndibonile iDrupal, Injini yokuBonisa, Inkululeko yeAccrisoft, kunye neendawo zeMarketPath ezazintle kwaye zinokusetyenziswa… hayi ngenxa ye-CMS, kodwa ngenxa yokuba ifemu ephuhlise umxholo yayinamava ngokwaneleyo okubandakanya zonke izinto zeCMS eziphakamisa ukukhangela, ezentlalo, amaphepha okufika, iifom, njl. iyafuneka.
Umyili wetimu olungileyo unokuphuhlisa umxholo omhle. Uyilo olukhulu lomxholo uya kuphuhlisa umxholo onokuwusebenzisa kwiminyaka ezayo (kwaye ufuduke ngokulula kwikamva). Sukugxeka i-CMS, usole umyili wemixholo!
tags: CMSInkqubo yolawulo lomxholodrupalIifom zomxhuzulaneimamexurhwebo inboundukudityaniswaJoomlaIndlela yentengisoisihlokoUyilo lomxholoWordPress
Iindlela ezingama-22 zokwenza uMxholo oNyanzelayo
Feb 22, 2012 ngo-3: 51 PM
Isikhonkwane entloko. Siphuhlisa i-90% yeeprojekthi zethu ezilungileyo ngeWordPress kwaye kukho amaxesha uya kuva izimvo ezinje kunye nezinto ezinje ngo “Ke, ayinakwenza ________”. Yeyiphi ngokuqinisekileyo impendulo echanekileyo ithi, “Ukuba akukho nto sele ikhona elungele iimfuno zakho (umxholo kunye/okanye iiplagi), kwaye ukuba umphuhlisi wakho uyayazi indlela yokusebenzisa i-API, ungenza kakhulu nantoni na ofuna ukuyenza ixesha elide kunye nohlahlo lwabiwo-mali apho. "
Kodwa ngamanye amaxesha umxhasi unengqondo yakhe ibekwe kwinto "entsha", ngoko ke unokuqengqeleka nayo okanye uyijike.
Feb 23, 2012 ngo-10: 08 AM
Inika umdla. Emva kokuqalisa umsebenzi kwi-Reusser Design, ndiye ndatshintshela ikakhulu ekusebenzeni ngaphakathi kwe-EE, iCMS yethu yokhetho, ukusuka kwiWordPress, endisebenza nayo kakhulu xa ndindedwa. Ndiya kuvumelana nawe kwimixholo yam yeWP yenze umahluko. Into enje ngomxholo weCanvas kaWooTheme, umzekelo, ibintle kakhulu ukusebenza ngaphakathi, ngelixa kukho ezinye ii-“premium” kunye nemixholo yesiko phaya… icky.
Oko kuthethiweyo, ndiyithanda kakhulu iEE yolawulo lomxholo wewebhusayithi, kwiimeko apho “ukubhloga” kungeyonto iphambili. Ilula, intle, kwaye yomelele ngakumbi kuneWP, ndiyacinga. Sekunjalo, xa wenza ezininzi zokubhala okanye ukubhloga ngaphakathi kweCMS yakho, akukho nto ibetha amava omsebenzisi weWP kulo mbhali.
Enkosi ngeposi yakho!
Feb 28, 2012 ngo-10: 26 PM
@awelfle:disqus Ndiyinto encinci xa kuziwa kwi-EE, ngokuqinisekileyo ibhalelwe ngakumbi abaphuhlisi be-MVC. Ngaloo nto engqondweni, ndiyaqonda ukuba uphuhliso lunobuhlobo ngakumbi kwaye lunokulinganisa kwaye alungomcimbi ungako. Kuba andizicingeli njengomphuhlisi osesikweni, ndihlala ndibambelele kwizinto ezilula ezingadingi ingcinga eninzi (kodwa ngokunyanisekileyo zinokubangela umonakalo omkhulu!).
Feb 28, 2012 ngo-4: 54 PM
Le ndawo ibonakala iluguqulelo olulungisiweyo lwe TwentyEleven. Ngaba kunjalo? Nokuba yeyiphi na indlela, uchanekile; imalunga nomxholo, hayi iCMS. Kodwa i-WordPress, i-IMHO, lelona qonga lihle kakhulu lokusebenza nalo ngalo mzuzu.
Feb 28, 2012 ngo-6: 56 PM
Iliso elihle, @jonschr:disqus ! Ngumxholo olungiswe kakhulu we-TwentyEleven… siwukrazule ngokwenene! Asikafiki ekugqumeni onke amagama emixholo. Kwaye siyayithanda inyani yokuba sinika abantu abalungileyo @Wordpress:disqus ingqalelo abayifaneleyo.
Feb 28, 2012 ngo-9: 40 PM
Ngomdla wokufun' ukwazi: Ndifike apha ngephepha lokufika elithe ngqo le-HTML elitsale kwesi sondlo. Kutheni ungazihlanganisi ngokuthe ngqo? Leyo yenye yezona WordPress 'mizobo enkulu kum; iitemplates zephepha ezahlukeneyo kulo naliphi na iqondo olikhethayo.
Feb 28, 2012 ngo-10: 24 PM
Molo @jonschr:disqus - beliphi iphepha lokufika? Sipapasha amakhonkco kwiindawo ezifana http://www.corporatebloggingtips.com kodwa ufuna ukugxila kwitrafikhi emva komthombo omnye. Ndingathanda ukuba nayo yonke i-traffic apha, ndityhale igunya phezulu kwesi sizinda, kwaye ndiqinisekise nawaphi na amakhonkco abuye atyhale esi sizinda ngeenjini zokukhangela. Ndiyathemba ukuba yiloo nto oyithethayo! Ukuba ndipapasha kwiindawo ezininzi, ndohlulahlula elo gunya… ndingathanda ukuba nesiza esi-1 esomeleleyo kunesi-2 esibuthathaka.
Feb 29, 2012 ngo-12: 16 AM
Ewe, nguye lowo! Hmm. Iyavakala… Nangona, ke, kutheni ungavele wenze “iphepha lokufika” libe liphepha lesalathiso sesi siza? Akukho tyala lijoliswe kuko konke; ndazibuza nje ukuba yintoni inzuzo. Ndiyalithanda iphepha lokufika, BTW. Intle kakhulu.
Feb 29, 2012 ngo-8: 46 AM
@jonschr:disqus akukho tyala lithathiweyo konke konke! Unokumangaliswa kukuqonda ukuba yindawo yeWordPress, nayo. Kwaye kukho itoni yamaphepha angaphakathi abonakala kwiinjini zokukhangela. Ngexesha lokukhutshwa kwencwadi, yayiyinto eqhelekileyo ukuba nesayithi lephepha lokufika ngokukodwa lencwadi. Bendifuna ukuba nesizinda esilungiselelwe "iblogi yenkampani" kwaye isebenze kakuhle. Bendifuna umxholo uhlaziywa rhoqo kwindawo kodwa bendingafuni ukuba ndibhale enye ibhlog ngokupheleleyo - ke ukutsala ukutya, unxibelelwano lwentlalo, kunye nokuyisebenzisa njengekhalenda yeziganeko kugcina itshintsha rhoqo. Ikwinqanaba elincomekayo kakhulu ngokweekota eziliqela ngoko ke iyenzile umsebenzi kwaye iyaqhubeka nokusithengisela iincwadi!